के सर्जिकल मास्क र एन ९५ मास्क धोएर पुन: लगाउन मिल्छ ? धुन मिल्दैन भने एउटा मास्क कति दिन सम्म लगाउन सकिन्छ त ? डाक्टरको मुखबाटै जान्नुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/के सर्जिकल मास्क र एन ९५ मास्क धोएर पुन: लगाउन मिल्छ ? धुन मिल्दैन भने एउटा मास्क कति दिन सम्म लगाउन सकिन्छ त ? डाक्टरको मुखबाटै जान्नुहोस !
काठमाडौँ, ९ भदौ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को प्रकोप नेपालमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । सुरुका दिनमा तराई र सुदुरपश्चिममा बढी संक्र`मण देखिएको थियो । तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका संक्र`मणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
संक्र`मितको संख्या दिनानु दिन बढ्दै जानु र दैनिक मृत`कको संख्या`मा बृ`द्दी हुनुले आम जनमा`नसमा चि`न्ताको विषय बनेको छ । अहिले सम्म भ्या`क्सिनको प्रयोग नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ बाट बच्ने एउटा मात्र उपाय आफु संक्र`मण बाट टाढा रहनु नै हो । त्येसको एउटा मात्र उपाए सा`माजिक घुल`मिल कम गर्नु र मास्क, सेनि`टाइजर लगायतको सहि प्रयोग गर्नु नै हो ।
यिनै प्रश्न र जिज्ञासा बारे सरु वारोग विशे षज्ञ डाक्ट`र अनूप सुवे`दीले केही दिनअघि सांसद गगन थापासँगको फेसबुक संवा`दमा स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। डाक्टर अनुपका अनुसार कपडाको जस्तो सर्जिकल मास्क र एन-९५ मास्क दुवै धोएर पुन: लगाउन मिल्दैन । मास्क धोए पछि त्यसको छिद्रहरूमा रहेको कपडा बिग्रन्छ। भाइरस सजिलै छिर्न सक्छ।
यसको पनि समाधान रहेको डाक्टर अनुप यसरी बताउछन – धुन नमिले पनि मास्क पुनः प्रयोग गर्ने तरिका छ। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू आज एउटा मास्क लगाउँछौं। त्यसलाई खोलेर कोठामा अलक्क कतै झुन्ड्या`एर राख्छौं। भोलि फेरि अर्को लगाउँछौं। त्यसलाई पनि उसैगरी झुन्ड्याएर राख्छौं। यसरी चार दिनसम्म हामी चारवटा छुट्टाछुट्टै मास्क लगाउँछौं। डाक्टर अनुप थप्छन – ‘मास्कको बाहि`री पत्र हातले छुन पनि हुँदैन। कसैगरी छोइहाल्यो भने हात साबुनपानीले धुनुपर्छ वा स्यानि`टाइजर लगाइहाल्नु`पर्छ।’